यौन सम्पर्क गर्दा युवत्तीको योनी-स्तन चलाउँनु पर्छ कि पर्दैन ! [१८+ ले मात्र हेर्नुहोला्] – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / यौन सम्पर्क गर्दा युवत्तीको योनी-स्तन चलाउँनु पर्छ कि पर्दैन ! [१८+ ले मात्र हेर्नुहोला्]
Anurag Post July 24, 2019	अनुराग पोष्ट, स्वास्थ्य Leaveacomment 204 Views
काठमाडौं । यौन जीवनमा सन्तुष्टि अत्यन्तै महत्वपुर्ण हुन्छ । महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको निप्पल पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन भन्ने, यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हुनुपर्छ । तर स्तनको स्पर्शले महिलाहरुलाई किन यौन आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका छन् ।
अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले गरको अध्ययनले महिलाहरुको स्तनको टुप्पो र योनीमा हुने समान यौन संवेदनशीलताको कारण यी दुइ अंगबाट प्रसार हुने संवेदना मस्तिष्कको एउटै भागले ग्रहण गर्नु हो । योनी र भग्निशिखाको स्पर्शका बेला उत्पन्न हुने उत्तेजनालाई मस्तिष्कको जुन भागले ग्रहण गर्छ स्तनको टुप्पोको स्पर्शका बेला उत्पन्न हुने उत्तेजनालाई पनि सोही भागले ग्रहण गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ रहेको छ ।
त्यसैले केही महिलाहरु स्तनको स्पर्श वा सुम्सुम्याइबाटै चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ। अर्थात स्तनमा हुने यहीँ संवेदनाको संचार र स्नायु सम्बन्धका कारण स्तनको भरपूर स्पर्शले मात्र पनि महिलाले चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने उनिहरुको दाबि रहेको छ । यस्तै पुरुषहरुको अण्डकोषमा बिस्तारै प्रेमस्पर्श गर्नाले, अर्थात हातले हलचल गराउनाले पुरुष पार्टनरलाई चरम उत्कर्षमा लैजान सकिने अध्ययनकर्ताहरुले बताएका छन् । एजेन्सी
Next दोस्रोपटक पाँच दिन म्याद थपिएपछि रवि लामिछानेका वकिलले गरे पत्रकार सम्मेलन